Nhau - Maitiro ekugadzirisa sei mota Injini Valve?
Nzira yekugadzirisa sei Car Injini Valve?
Zvemota zvikamu injini vharafu nzvimbo yekushanda ine hukasha, kusangana kwakanangana neiyo gasi, iyo yakanyanya tembiricha yevhavha yekudzimisa inogona kusvika 800 ℃, uye pakupera kwekugadzirisa lubrication, pamwe nebasa revhavha kana iko kuvhura nekuvhara chiito kuri kazhinji, zvikamu zvevhavha zviri nyore kwazvo kuburitsa kukuvara. Naizvozvo, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune iyo vharuvhu zvikamu zvekugadzirisa, kuve nechokwadi kuti iri mune yakajairika mamiriro ekushanda.
1. Valve kuongorora uye kugadzirisa
(1) Tarisa kupindika kwemusoro wevhavha uye hunde. Kana mugumo wevhavhavha wakaremara kana kusakara, gadzirisa, uye kukosha kwekugadzirisa kunofanirwa kuve iko kushoma kukosha. Gaya kumeso kwevhavha.
(2) Tsiva vharafu kana pakukora kweiyo mota injini vharuvhu iri pasi peyakaganhurwa kukosha. Paunenge uchisevha, tarisa kumagumo kwevhavha yega yega yekutsauka, kupfeka, uye kukotama.
(3) Tarisa nzvimbo yekushanda uye hunde yevhavha yega yega yekupfeka, kupisa, kana deformation, uye kutsiva kana zvichidikanwa.
(4) Shandisa muganho wevharuvhu yekupedzisira yekutsauka: 0.1mm yevhavha yekudya, 0.1mm yevhavha yekuzadza; chiyero chakakosha chevhavha yemusoro ukobvu: 1.0mn yevhavha yekudya, 1.5mm yevhavha yekupedza; muganho wekushandisa: 0.7mm yevhavha yekudyiwa, 1.0mm yevhavha yekuzadza.
(5) Shandisa micrometer uye V-furemu kuyera vharuvhu hunde vachikotama. Iko vharuvhu inotsigirwa pamaviri V-mafuremu ari chinhambwe che100 mm, uyezve kukotama kunoyerwa pa 1/2 yeiyo vharuvhu kureba ine micrometer. Kana muganhu unobvumidzwa wadarika, unofanirwa kugadziriswa nemuchina wekudhinda.
2. Kubviswa kwegungano revhavha
Mushure mekunge chitima chevhavha chakaunganidzwa, chitubu chiri munzvimbo yakatakurwa, kana chikabviswa zvisizvo, chitubu chinobuda uye chinokuvadza muviri wemunhu, nekudaro, zvinofanirwa kushandisa yakakosha vharuvhu chitubu che disassembler kuti iite mashandiro akajairika kana uchibvarura vharuvhu chitima, kuitira kuve nechokwadi chekuchengetedza kwakachengeteka kwe auto zvikamu injini vharuvhu chitima. Iyo yechitubu inobata yakadzvanywa pasi neiyo chitubu pre-tensioned nechitubu chinobvisa kuitira kuti iyo yekukiya pini ive yemahara uye inogona kubviswa nyore. Iyo yekupedzisira inobata inozorora zvishoma nezvishoma pamwe chete neiyo chitubu kusvikira iyo chitubu iri mune yakasununguka yakasununguka nzvimbo yemahara.
3.Kuchinja Vharuvhu Chigaro Coils
Nzvimbo yekushandira yechigaro chevhavha iri kudzikira zvishoma nezvishoma mushure mekuverengera kana kukuya, izvo zvinokanganisa kudyidzana pakati pevhavha nechigaro. Kana iko kunoshanda kwechigaro chevhavha iri 1.5mm pazasi pechigaro chevhavhavha, iyo vharuvhu chigaro chekara chinofanira kutsiviwa. mm, iyo vharuvhu chigaro kora inofanirwa kutsiviwa. Nzira yekutsiva: shandisa maturusi akakosha kuti ubudise kora yechigaro chekare, uye woisa chigaro chitsva chekoko ne 0. 0.75 ~ 0. 125 mm kupindirana negomba rekugara mukati memvura yenitrogen tangi inotonhora inoderera 15 ~ 20 s. Afters yakadzvanywa muchigaro che cylinder musoro gomba kuitira kuti ipise panopisa tembiricha. Neimwe nzira, pisa chigaro chegomba remusoro wecylinda kusvika pa100 ° C uine blowtorch kana gasi torchi (empirical maitiro: usati wapisa musoro wesilinda, isa chena choko upfu wakakomberedza gomba rekugara, woipisa kusvika panenge 100 ° C kana chena hupfu inoshanduka yero), wozo rova ​​chigaro chemukati nekukurumidza uye utonhorere mumhepo.